Birding in Bagan - Myanmar Birding Tours Bagan World Heritage
Birding in Bagan
August 23, 2019 @ 8:00 am – August 25, 2019 @ 5:00 pm
Birding in Bagan Activity
Birding in Bagan activity is organized by SST Tourism and Myanmar Bird & Nature Society(MBNS) asavisit to Bagan World Heritage and Myanmar Endemic Birds.
awareness raising for bird and nature conservation by birding activity
birding together, making friendship, sharing knowledge
call on youth participation in Nature conservation
SST Tourism Co.,Ltd Contact Phone: 01-255536, 393094
Birding activity No.2 to Bagan on 23rd August 2019( Friday)
We are happy to announce that birding activity No.02 in Bagan will be launched active collaborated by S.S.T Tourism Co.,Ltd and MBNS(Myanmar Bird and Nature Society). We are welcome to this program who would like to be participated.
Birding Site – Bagan
Highlight Species – Burmese Prinia, Hooded Treepie, Jerdon’s Minivet, Burmese Collared-dove, White-throated Babbler, Ayeyarwaddy Bulbul, Burmese Bushlark, Laggar Falcon
Leaving Date – 23rd August 2109( Friday)
Meeting Point – Aungmingalar High Way Bus Station, Yangon
Leaving Time – confirm later
Deadline – 20th August 2019(Tuesday)
Tour Cost – 60,000KS per person
Contact Numbers – S.S.T Tourism Office 01 255536 / 01 393094
U Htay Ngwe – 09442163019
Daw Hlaing Nyein Aye – 09250261410
Requirements – Water bottle, Raincoat( not bright color), Binoculars, Birding Uniform (such as shoe and grey, green or black clothes, trouser), Pen or Pencil and Notebook
Note : Please do not wear bright Uniform like white color, blue color, yellow color, red and pink color
Day 1. (23 Aug 19) Evening leave from Yangon Aungmingalar Highway Bus Station to Bagan. Overnight on the Bus.
Day 2. (24 Aug 19) The whole day birding around Bagan. Overnight in Bagan.
Day 3. (25 Aug 19) The whole day birding around Bagan. Come back to Yangon by Night Bus.
1)Yangon – Bagan (Bus Tickets)
2)Accommodation one night in Bagan( Guest House)
3)Transportation charges in Bagan
အညာမြေက မြန်မာငှက်များဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက်
ပုဂံသို့ ငှက်ကြည့်ခြင်းနှင့် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ခြင်:ခရီးစဉ်အမှတ် -ဝ၂
ခရီးစဉ်ပြုလုပ်မည့်ရက်စွဲ – ၂၃ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
ဤခရီးစဉ်အား SST ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ နှင့် မြန်မာငှက်ဝါသနာရှင်အသင်းတို့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
• စုပေါင်းငှက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦးခင်မင်ရင်နှီးပြီး
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ၊အသိပညာ ဗဟုသုတများ နှီးနှောဖလှယ် နိုင်စေရန်။
• လူငယ်များ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင် ထိန်းသိမ်းလိုသော
စိတ်ဓါတ် များ ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်။
၂၃ရက်သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သောကြာနေ့တွင် ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကြီးကွင်းမှ ညကားဖြင့် ပုဂံသို့ ထွက်ခွာပါမည်။ ရောက်သည့်နေ့တွင်ပင် ပုဂံရှိ မြန်မာမျိုးရင်းငှက်များနှင့် အခြားမျိူးစိတ် များကို တစ်နေ့လုံး လေ့လာကြည့်ရူ ကြပါမည်။ ထိုနေ့ညတွင် ပုဂံ၌ ညအိပ်တည်းခိုပါမည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်လည်း တစ်ရက်လုံး ငှက်ကြည့်ပြီးနောက် ညကားဖြင့် ပုဂံမှရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ကြပါမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးလျှင် ၆၀,ဝ၀ဝ သောင်းကျပ်
၁။ ရန်ကုန်- ပုဂံ အသွားအပြန် Highway bus ကားခ
၂။ ပုဂံတည်းခိုးခန်း ( 1 night on 24 Aug 2019)
၃။ ပုဂံငှက်ကြည့်ရတွင် အသုံးပြုမည့် ကားခ
ဒေါ်လှိုင်ငြိမ်းအေး ( ဝ၉- ၂၅၀ ၂၆၁ ၄၁၀)
Dead Line: ၂၀ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၉၊ အင်္ဂါနေ့၊ နောက်ဆုံးထားပြီစာရင်းပေးသွင်းပေးကြပါရန်။
Bagan, Myanmar + Google Map
« My Photos of Birds by Ko Phyo
Myanmar Bird Photos Exhibition »